NGO Database | Local Resources Centre
To submit your organization profile
Local Resource Centre is collecting the profile information of Local NGOs, INGOs, In-country Donors and NGO Networks in order to achieve in the database and post in the website. These databases will be useful for development policy makers, agencies who are seeking for partnership and corporation, donor agencies and ultimately for the development of Myanmar civil society and socio-economic development of the country. Therefore, please fill in the following form and upload your organisations’ profile to include in the online and offline CSO database.
ဖှံ့ဖွိုးရေးမဏ်ဍိုငျအဖှဲ့ (Local Resource Centre) သညျ ပွညျတှငျးလူမှုရေးအသငျးအဖှဲ့တဈခုဖွဈပွီး အဖှဲ့၏လုပျငနျးရပျ တဈခုအနနှေငျ့ လူမှုရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးလုပျငနျးမြားဆောငျရှကျနကွေ သော အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးမြား အားလုံးကို စနဈတကမြှတျတမျးတငျပွုစုထားရနျ ရညျရှယျပါသညျ။ ထိုမှတျတမျး database မြားကို ဖှံ့ဖွိုးရေးဆိုငျရာမှုဝါဒရေးဆှဲသူမြား၊ မိတျဘကျအဖှဲ့ အစညျးရှာဖှသေူမြား၊ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုလုပျလိုသူမြား၊ အလှူရှငျအဖှဲ့အစညျးမြား၊ အကူအညီတောငျးခံလိုသူမြား စသညျအားဖွငျ့အသုံးပွုနိုငျမညျဖွဈပွီး၊ နိုငျငံတညျဆောကျရေး၊ လူမှုစီး ပှားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးတို့အတှကျ အလှနျအဖိုးတနျသော သတငျးအခကျြအလကျမြား ဖွဈလာမညျဖွဈပါသညျ။ ထို့အပွငျ ဖှံ့ဖွိုးရေးမဏ်ဍိုငျအဖှဲ့သညျ ပွညျတှငျးအနျဂြီအိုလမျးညှနျ၊ နိုငျငံတကာအနျဂြီအိုလမျးညှနျ၊ အနျဂြီအိုကှနျရကျလမျးညှနျ၊ အလှူရှငျလမျးညှနျစသော အနျဂြီအိုလမျးညှနျစာအုပျအမြိုးမြိုး ကိုလညျး ထုတျဝခေဲ့ပါသညျ။ လကျရှိအခြိနျတှငျ အရပျဘကျလူ့အဖှဲ့အစညျးအမြိုးမြိုး၏ အဖှဲ့အစညျးဆိုငျရာသတငျးအခကျြအလကျမြားကို www.lrcmyanmar.org တှငျ online database အဖွဈ မညျသူမဆိုအလှယျတကူလ့လာနိုငျရနျထားရှိပေးပါသညျ။
Thank you so much for your corporation! Local Resource Centre
Submitaorganizational profile
-- Type of Organization -- -- State-- -- Sector--
ခွန်အားသစ် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးဝင်ငွေတိုးအဖွဲ့ Local NGO
ခွန်အားသစ် - ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး ၀င်ငွေတိုးအဖွဲ့ 09-91016252 Local NGO
ချမ်းမြသုခ ပရဟိတ လူမှုကူညီရေး အသင်း 09-2021662, 02-59164 Local NGO
ချမ်းမြသုခ ပရဟိတ လူမှုကူညီရေး အသင်း Local NGO
ချစ်သော မြန်မာအဖွဲ့ Local NGO
ကရုဏာ မြန်မာလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း Local NGO
ကျူး-FOCUS Health (ကျန်းမာရေး), Education (ပညာရေး), Capacity building (စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း), Child Rights ( ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး), Child protection (ကလေးသူငယ်ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခြင်း), Multi-Sectors 09-421035164 Local NGO
ကလေးသူငယ်များပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း Local NGO
ကလုံးထာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ Human Rights (လူ့ အခွင့်အရေး) 09-73215738, 09-49850266 Local NGO
ကရင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် Local NGO
ကရင်အမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ Local NGO
Zwe Man Thit 01-620961 Local NGO Yangon (ရန်ကုန်)
Zwe Ka Bin Education (ပညာရေး) 09 425040998 Local NGO
Zogam Rural Development Programme 073-21887
Local NGO Sagaing (စစ်ကိုင်း)
Zewaka Foundation 388188 Local NGO Yangon (ရန်ကုန်)
ZEWAKA FOUNDATION Local NGO
Youth Social Force Health (ကျန်းမာရေး), Education (ပညာရေး), Capacity building (စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း), Civic empowerment (နိုင်ငံသားများ၏စွမ်းရည် မြှင့်တင်ခြင်း), Environment (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်) info@ysfmyanmar.org, info@TaxilaInstitute.org Local NGO Yangon (ရန်ကုန်), Mandalay (မန္တလေး)
Youth of Holy Force 09 240 1052; 220321;
09 997 3517 Local NGO Yangon (ရန်ကုန်)
Youth Mobile Knowledge Sharing Group Education (ပညာရေး) 09-73216652 Local NGO Yangon (ရန်ကုန်)
Youth Light Social work (charity) (ပရဟိတ/လူမှုရေးလုပ်ငန်း) - Local NGO Tanintharyi (တနင်္သာရီ)
ခွန်အားသစ် - ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး ၀င်ငွေတိုးအဖွဲ့ Local NGO
ချမ်းမြသုခ ပရဟိတ လူမှုကူညီရေး အသင်း Local NGO
ကျူး-FOCUS Health (ကျန်းမာရေး), Education (ပညာရေး), Capacity building (စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း), Child Rights ( ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး), Child protection (ကလေးသူငယ်ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခြင်း), Multi-Sectors Local NGO
ကလုံးထာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ Human Rights (လူ့ အခွင့်အရေး) Local NGO
Zwe Man Thit Yangon (ရန်ကုန်) Local NGO
Zwe Ka Bin Education (ပညာရေး) Local NGO
Zogam Rural Development Programme Sagaing (စစ်ကိုင်း) Local NGO
Zewaka Foundation Yangon (ရန်ကုန်) Local NGO
Youth Social Force Health (ကျန်းမာရေး), Education (ပညာရေး), Capacity building (စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း), Civic empowerment (နိုင်ငံသားများ၏စွမ်းရည် မြှင့်တင်ခြင်း), Environment (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်) Yangon (ရန်ကုန်), Mandalay (မန္တလေး) info@ysfmyanmar.org, info@TaxilaInstitute.org Local NGO
Youth of Holy Force Yangon (ရန်ကုန်) Local NGO
Youth Mobile Knowledge Sharing Group Education (ပညာရေး) Yangon (ရန်ကုန်) Local NGO
Youth Light Social work (charity) (ပရဟိတ/လူမှုရေးလုပ်ငန်း) Tanintharyi (တနင်္သာရီ) - Local NGO
အသကျ ၃၀ မှ ၄၅ နှဈအတှငျး အမြိုးသမီးတ ...